Is The Federal police trying to reserve the Gullallee OLF’s Office for the Five? – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIs The Federal police trying to reserve the Gullallee OLF’s Office for the Five?
Waajjirri ABO Gullallee ummataaf sa’aatii laqaanaa 1:00pm irraa qabee akka poolisootni eegaa turan lakkisan himamee booda achii deeman.
Akkuma poolisootni eegan achii deemaniin Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi jiraattotni magaalaa Finfinnee gara waajjira ABO Gullallee deemuun akka qulquleessanii hojii idilee dhaabaa achitti hojjetamuu qabuuf ilaalaa turan.
Poolisootni sa’aatii laaqanaatti kaafaman galgala keessa sa’aatii 4:00pm tti dhufanii deebi’anii akka namuu seenuu hin dandeenye godhan. Poolisootni deebi’anii dhufan yeroo gaafataman komishinii Poolisii federaalaa irraa ajajni darbe jennaan deebinee akka eegnu taasifamne jedhan.
Suuraa kana yeroo ka’an waraanni hidhannoo guutuun mooraa mana HD ABO Jaal Daawud Ibsaa itti marsee isaan ugguree jira. Namni gombisa dhaqe waraansa hin sodaatu isa jedhan waan taheef waan dhufu hunda hadhaa qabsoo waan taheef dhamdhamuuf kokkolfaa suuraa ka’anii waraana isaan marsee jirutti gadi bahan .
Akka gadi bahaniin qabamanii hidhaman turtii yeroo boodas ni hiikaman .
ABOn Gaaddisa Oromooti.
Dubbataan murna Hilton kun waraana pp waliin Lixa Oromiyaa deemee jira jedhama.
የሁከት ነጋዴዎች …
በቅርብ ቀን ይጠብቁን!